समाचार - सुख्खा पाउडर मोर्टार र भिजेको मिश्रित मोर्टारको फाइदा र बेफाइदाको परिचय
1. भिजेको मिश्रित मोर्टारका फाइदाहरू र हानिहरू
भिजेको मिश्रित मोर्टार एक तयार मिश्रित मोर्टार हो जसले मिक्सिङ प्लान्टमा निश्चित अनुपातमा सिमेन्ट, फाइन एग्रीगेट, खनिज मिश्रण, मिश्रण, एडिटिभ्स, पिग्मेन्ट र पानी जस्ता कच्चा पदार्थहरू मापन र मिश्रण गर्दछ, र त्यसपछि तिनीहरूलाई निर्माण स्थलमा ढुवानी गर्दछ। प्रयोगको लागि मिक्सिङ यन्त्रको साथ यातायात सवारी साधन, जुन तोकिएको समय भित्र प्रयोग गर्न आवश्यक छ। गुणस्तर स्थिर छ र आपूर्ति मात्रा एक पटक ठूलो छ। साइटमा आइपुगेपछि, मोर्टार पहिले भण्डारण गरिन्छ, र त्यसपछि निर्माण कार्यकर्ताहरूले म्यानुअल रूपमा आधार सामग्रीमा मोर्टार राख्छन्। गीला मिश्रित मोर्टार कंक्रीट मिक्सिङ प्लान्टमा उत्पादन गरिन्छ, जसमा सही मापन र छिटो उत्पादन गतिको विशेषताहरू छन्। भिजेको मिश्रित मोर्टार एक प्रकारको मोर्टार मिश्रण हो, र यसको प्रयोग समय सीमित छ, त्यसैले यो उत्पादन पछि एक निश्चित समय भित्र प्रयोग गर्नुपर्छ।
भिजेको मिश्रित मोर्टारका यी विशेषताहरूले विकासमा यसको फाइदा र बेफाइदाहरू पनि देखाउँछन्। यसका फाइदाहरू निम्नानुसार छन्:
（1） औद्योगिक उत्पादन गुणस्तर नियन्त्रण र आश्वासनको लागि अनुकूल छ;
（2） ठूलो एक-पटक आपूर्ति, विशेष गरी पुल फुटपाथ लेभलिंग लेयर निर्माण, तह वाटरप्रूफ निर्माण र अन्य परियोजनाहरूको लागि उपयुक्त;
（3） त्यहाँ साइटमा मिश्रणको लागि कुनै आवश्यकता छैन, जसले सुकाउने उपकरण र प्याकेजिङ उपकरणहरूको खर्च बचत गर्छ;
（4） निर्माण साइट राम्रो वातावरण र कम प्रदूषण छ;
(5) कच्चा माल को एक विस्तृत छनोट छ। कुल सुक्खा वा भिजेको बिना सुक्खा हुन सक्छ, जसले लागत कम गर्दछ;
（6） यसलाई फ्लाई ऐश जस्ता औद्योगिक फोहोरको अवशेषको ठूलो मात्रामा मिसाउन सकिन्छ, जसले स्रोतहरू मात्र बचत गर्न सक्दैन, तर मोर्टारको लागत पनि कम गर्न सक्छ।
निस्सन्देह, यसको उत्पादन र प्रयोगमा धेरै हानिहरू पनि छन्:
（1） पेशेवर निर्माताहरू द्वारा राम्रोसँग मिसाइएको हुनाले, यसलाई साइटमा बन्द कन्टेनरहरूमा भण्डारण गर्न आवश्यक छ, र एक पटकको यातायात भोल्युम ठूलो छ, जुन सीमित समयमा प्रयोग गरिनुपर्छ, त्यसैले यसलाई लचिलो रूपमा नियन्त्रण गर्न असम्भव छ। निर्माण प्रगति अनुसार खपत;
（2） त्यहाँ एक-पटकको यातायातको ठूलो मात्रा छ, त्यसैले यो साइटमा बन्द कन्टेनरहरूमा भण्डारण गर्न अपरिहार्य छ। समयको साथ, यसले कार्यशीलता, समय सेटिङ र मोर्टारको कार्य प्रदर्शनको स्थिरतामा उच्च आवश्यकताहरू हुनेछ;
（3） यातायातको समय ट्राफिक अवस्था द्वारा प्रतिबन्धित छ।
2. सुख्खा मिश्रित मोर्टारका फाइदाहरू र हानिहरू
सुख्खा मिश्रित मोर्टार एक प्रकारको तयार मिश्रित मोर्टार हो, जुन निश्चित अनुपातमा विभिन्न सुख्खा कच्चा पदार्थहरूबाट बनेको हुन्छ, सही रूपमा कन्फिगर गरी कारखानाद्वारा मिलाइन्छ, झोला वा बल्कमा निर्माण स्थलमा ढुवानी गरिन्छ, र पानी वा सहायक कम्पोनेन्टहरूमा मिसाइन्छ। प्रयोगको ठाउँमा निर्दिष्ट अनुपात। त्यसकारण, भिजेको मिश्रित मोर्टारको तुलनामा, यो प्रयोग समय र मात्रामा सीमित छैन, त्यसैले यो तयार मिश्रित मोर्टारको विकासको अग्रणी दिशा हो।
सुख्खा मिश्रित मोर्टारका धेरै फाइदाहरू छन्:
（1） उत्पादन दक्षता उच्च छ। किनभने यो साइलोमा ढुवानी गरिन्छ, स्वचालित रूपमा हलचल, पम्प गरिएको र मेकानिकली रूपमा लागू गरिएको मोर्टार, यसको उत्पादन दक्षता परम्परागत उत्पादन क्षमताको 500% - 600% पुग्छ;
（2） निर्माण दक्षताको यान्त्रिक मिश्रणले मोर्टारको सही उपचार र निर्माण सुनिश्चित गर्न सक्छ, ताकि धेरै वा धेरै कम पानी र गलत सूत्र मिसाउने घटनाबाट बच्न;
（3） मोर्टारमा धेरै किस्महरू, उत्कृष्ट गुणस्तर, स्थिर प्रदर्शन र सुविधाजनक अनुप्रयोग छ;
（4） आर्थिक लाभ सुख्खा मिश्रित मोर्टार राम्रो बालुवा ग्रेडिंग र सानो कण आकार छ। गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने आधारमा, मोर्टारको मोटाई कम गर्न सकिन्छ र निर्माण खुराक कम गर्न सकिन्छ;
（5） सामाजिक फाइदाहरू सुख्खा कंक्रीट मोर्टारले उत्पादन, परिसंचरण र आपूर्तिको एकीकरणको व्यवस्थापन प्रणालीलाई महसुस गरेको छ, जसले नयाँ भवन सिमेन्टियस सामग्रीको औद्योगिक उत्पादन दिशा प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यो तुरुन्तै पानी संग प्रयोग गर्न सकिन्छ, सञ्चालन यन्त्रीकृत छ, मान्यता प्राप्त कार्य अवस्था सुधारिएको छ, र श्रम उत्पादकता सुधारिएको छ।
यद्यपि, सुख्खा मिश्रित मोर्टारमा अझै पनि निम्न बेफाइदाहरू छन्:
（1） सुक्खा पाउडर मोर्टार उत्पादन लाइन को लगानी अपेक्षाकृत ठूलो छ, र बल्क ट्यांक र यातायात सवारी साधन को लगानी पनि ठूलो छ;
（2） किनभने कच्चा माल सुख्खा कच्चा माल द्वारा मिश्रित छन्, त्यहाँ सामग्री को आर्द्रता सामग्री को लागी उच्च आवश्यकताहरु छन्, त्यसैले कच्चा माल को चयन मा केहि प्रतिबन्धहरु छन्;
（3） निर्माणको क्रममा साइट पानी मिश्रण आवश्यक छ, त्यसैले सामग्री मिश्रण कर्मचारीहरूको व्यावसायिक प्रविधिको लागि उच्च आवश्यकताहरू छन्;
（4） भण्डारण र वायमेटिक कन्भेइङको प्रक्रियामा, सामग्री विभाजन उत्पादन गर्न सजिलो छ, परिणामस्वरूप असमान मोर्टार।